Budada ugu fiican ee NR (23111-00-4) Soo-saaraha Shiinaha & warshadda
Cofttek waa soo saaraha ugu fiican ee Nicotinamide Riboside Chloride Chine ee Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah oo ah 2100kg.
Budada NR (23111-00-4) fiidiyow
Nikotinamide Riboside Chloride (NR) Smamnuucista
Qaaciddada Molecular: C11H15ClN2O5
Miisaanka kelli: 290.7 g / mol
Dhibcaha Biyaha: 115-125 ℃
Magaca kiimikada: 3-carbamoyl-1-((3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride
micne ah: Nicotinamide riboside; SRT647; SRT-647; SRT 647; Nikotinamide Riboside Triflate, α / β isku dar
Furaha gudaha: YAABIFCKURFRPPO-FSDYPCQHSA-N
Kala badh: saacadood 2.7
Codsiga: Nikotinamide riboside waxaa loo sheegaa inuu yahay nooc cusub oo ah pyridine-nucleoside oo ah fiitamiin B oo u shaqeynaya hor udhaca nicotinamide adenine dinucleotide ama NAD +.
Imaanshaha: Dufcaddii Caddaan oo Burcad Buruuruca ah ah
Jidhka aadamuhu waa dhisme kakan oo ka kooban unugyo, unugyo, iyo hababka xubnaha. Shaqada saxda ah ee unugyada iyo unugyada jirka waxaa nidaamiya oo caawiya kiimikooyin kala duwan, enzymes, iyo nafaqooyin. Qaar ka mid ah kuwan jidhku wuu is samayn karaa, qaarna waa in la cunaa. Sidaa darteed, nafaqooyinkaani waxay ku jiraan qaab cunto iyo kaabis. Mid ka mid ah qaybahan oo gacan ka geysan kara bogsashada iyo nidaaminta jirka ayaa lagu magacaabaa nicotinamide riboside chloride (NR). Waxay ka caawisaa kordhinta xaddiga nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) ee jirka.
Muxuu Nicotinamide Riboside Chloride sameeyaa?
Nicotinamide Riboside Chloride, oo sidoo kale loo yaqaan NR, waa pyridine nucleoside of vitamin B3. Waxay u shaqaysaa sidii horudhac u ah nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). Waxaa loo heli karaa sidii caddaan-caddaan ah oo ah budo midab leh oo huruud ah. Waa mid ka mid ah kuwa aadka loo barto NAD+ horudhaca maadaama ay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan.
NAD+ ayaa lala xiriiriyay inay noqoto mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee ka shaqeeya hababka kala duwan ee homeostasis ee jirka. Waxay gacan ka geysan kartaa ilaalinta caafimaadka jirka, kordhinta cimriga unugyada, ka caawinta sameynta howlaha dheef -shiid kiimikaadka kala duwan iyo caawinta daaweynta cudurrada kala duwan ee jirka.
Budada NR waxay muujisay hufnaan sida daaweyn soo koraysa oo cuduro kala duwan ah. Qiyaaso badan, NR waxay daaweyn kartaa xaaladaha sida cudurrada wadnaha, cudurrada neerfaha, cudurrada muruqyada, iyo xanuunnada dheef -shiid kiimikaadka. NR ayaa sidoo kale la muujiyey inay dib u dhigto gabowga unugyada oo ay cimrigooda dheereeyaan. Waxaa laga helaa badeecooyinka cuntada sida kalluunka, digaagga, ukunta, caanaha, iyo badarka.
Si loo fahmo waxa nicotinamide riboside chloride sameeyo, waa inaan marka hore fahanno nicotinamide adenine dinucleotide ama NAD+.
NAD+ waa coenzyme muhiim u ah jirka aadanaha. Waxay u shaqaysaa samaynta waddooyin dheef -shiid kiimikaad kala duwan. Joogitaankiisa jirka ayaa lagama maarmaan u ah daaweynta noocyo badan oo cudurro ah. Waxay kaloo gacan ka geysataa soo saaridda tamarta maskaxda, unugyada difaaca, iyo muruqyada.
Qadarka NAD+ ee laga heli karo ilaha cuntada ayaa aad u yar. Tani kuma filna unugyo badan oo jirka ah inay isticmaalaan. Haddaba si loo soo saaro, jidhku wuxuu maraa waddooyin kala duwan. Waxaa jira saddex dariiq oo waaweyn oo NAD+ lagu soo saari karo. Waddada de novo synthesis pathway, the Preiss Handler pathway, iyo Marinka Badbaadinta.
Dariiqa Badbaadintu waa habka ugu badan ee NAD+ lagu sameeyo jirka. Dariiqaas, NAD+ waxaa ku dhaca falcelinno aan caadi ahayn. Waxaa ka mid ah in lagu yareeyo laba u dhigma elektaroonig, ka dibna loo rogo qaab la yiraahdo nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Maaddaama kaabista cuntada aysan ku filneyn baahida jirka ee NAD+, dariiqa badbaadintu wuxuu adeegsadaa oo dib u adeegsadaa NAD+ iyo qaababkeeda kala duwan.
Mid ka mid ah ficillada ugu waaweyn ee NAD+ sameeyo ayaa ah hawlgelinta sirtuins, koox ka kooban 7 enzymes, Sirt1 ilaa Sirt7. Enzymes -ku waxay leeyihiin shaqada xakamaynta gabowga iyo cimriga unugyada. Sirtuins -ku waxay ku dhaqmaan habab badan oo dheef -shiid kiimikaad ah, sida sii -deynta insuliinta, abaabulka lipids -ka, iyo jawaab -celinta walaaca. Xataa waxay xakamayn kartaa cimriga. Sirtuins -ku waxay firfircoonaan marka heerarka NAD+ kor u kacaan.
NAD+ sidoo kale waa substrate koox koox borotiinno ah oo loo yaqaan poly ADP-ribose polymerase (PARP). Waxay mas'uul ka tahay dayactirka DNA iyo xasilloonida hidde -sidayaasha waxayna sidoo kale mas'uul ka noqon kartaa cimri dheer.
Heerarka NAD+ ayaa hoos u dhacaya da'da iyo jirrooyinka. Qaar ka mid ah sababaha hoos -u -dhaca ayaa ah barar dabadheeraad ah, kordhinta firfircoonida nidaamka difaaca, iyo hoos u dhaca hawsha nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), taasoo horseedaysa hoos -u -soo -saarkeeda. Marka jidhka bini -aadamku sii gaboobo, heerka waxyeellada DNA -ga waxay kordhisaa fursadaha dayactirka oo yaraada, oo sababa gabowga iyo kansarka.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu kordhin karo heerarka NAD+ ee jirka. Wax yar bay cunayaan waxayna xakameynayaan tirada kalooriyada, soonka, iyo jimicsiga. Waxqabadyadani waxay kaloo gacan ka geysan karaan sidii jirku u ahaan lahaa mid caafimaad qaba oo firfircoon.
Farsamooyinka kale ee lagu kordhinayo NAD+ waxaa ka mid ah cunista tryptophan iyo niacin iyo qaadashada NAD+ dhiirrigeliyeyaasha sida nicotinamide riboside chloride iyo nicotinamide mononucleotide.
Nicotinamide riboside chloride waa horudhaca kordhin kara heerarka unugyada NAD+. Sidoo kale waa il laga helo Vitamin B3. Waa badeecad ka shaqaysa dariiqa badbaadinta ee wax soo saarka NAD+. Waxay u beddeshaa nicotinamide mononucleotide (NMN) iyadoo la kaashanayo enzyme NR kinase Nrk1. Waxay markaa u sii beddeleysaa NAD+.
Ka dib bixinta NR, heerarka NAD+ waxay ku kordhaan jirka, oo markaa loo qaybiyo qaybo kala duwan. Uma gudbi karo caqabad-maskaxda, laakiin wuxuu isu beddelaa nikotiinamide kaas oo markaa loo sii gudbiyo maskaxda iyo unugyada kale halkaas oo ay ka samaysato NAD+.
Inta badan macluumaadka ku saabsan waxtarka Nicotinamide Riboside chloride waxay ka timaaddaa cilmi -baarista xayawaanka. Baadhitaanka ku salaysan bina-aadamku wali waa mid kooban oo aad baa loogu baahan yahay.
Faa'iidooyinka Nicotinamide Riboside Chloride
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah isticmaalka Nicotinamide Riboside Chloride. Waxay kala yihiin:
Saameynta Cudurada Neuromuscular
Awoodda riboside ee nicotinamide ee kordhinta NAD+ waxay hagaajin kartaa shaqooyinka mitokondria. Tani waxay kaa caawin kartaa daaweynta myochohies mitochondrial . Budada NR ayaa sidoo kale lagu muujiyey inay wax ku ool u tahay hagaajinta shaqooyinka dystrophies muruqa.
Saameynta cudurada wadnaha
Dhibaatooyin kasta oo ku dhaca dheef -shiid kiimikaadka NAD+ waxay sababi karaan dhibaatooyin wadnaha iyo xididdada dhiigga. Waxay sababi kartaa xaalado ay ka mid yihiin wadne -istaag, cadaadis xad -dhaaf ah, wadne -xannuun myocardial, iwm. Kordhinta NR waxay keeni kartaa saamiga NAD + iyo nicotinamide adenine dinucleotide + hydrogen (NADH) si caadi ah una joojiso dib -u -habaynta aan fiicnayn ee unugyada wadnaha . Waxa kale oo ay beddeli kartaa saamaynta wadne -istaagga.
Saamaynta cudurada neurodegenerative
Cudurrada neerfayaasha ayaa caadi ahaan ku dhaca gabowga. Waxay la xiriiraan walbahaarka oksaydhka oo dhaawici kara DNA -da. Caadi ahaan, waxaa jiri doona falal aan caadi ahayn ee mitochondria, iyadoo la raacayo qodobo ka dib unugyadu si fiican uma shaqeyn karaan. NAD+ ayaa hoos u dhacda marka jirku sii gaboobo, taasoo horseedaysa in si aan habboonayn u shaqeeyo mitochondria. Tani waxay sababi kartaa cuduro kala duwan oo neerodegenerative ah. Waxay kaloo kordhin kartaa fursadaha cudurka Alzheimers.
Nicotinamide Riboside chloride waxay kordhisaa xaddiga NAD+ ee jirka, waxay yareysaa cadaadiska oksaydhka, waxayna sidoo kale hagaajin kartaa DNA -ga waxyeelloobay. Waxa kale oo ay waxtar u leedahay daaweynta cudurka Alzheimers ee jiirarka . Waxay kaloo yareyn kartaa bararka maskaxda, oo ka caawisa hagaajinta garashada iyo xusuusta . Waxay tan ku samayn kartaa iyadoo la yareynayo xaddiga borotiinka horudhaca ah ee amyloid-and iyo in la joojiyo amyloidogenesis.
Budada NR waxay sidoo kale joojin kartaa burburka axon ee qaababka dabadheeraad ah ee cudurrada neerfayaasha iyadoo la beddelo dheef -shiid kiimikaadka NR ee axon . Hoos -u -dhaca ku yimaadda neerfayaasha ganglion -ka ee aaraa oo gudaha u geliya unugyada timaha cochlear -ka ayaa dhici kara ka dib soo -gaadhista dhawaaqyada aadka u daran. NR waxay muujisay inay waxtar u leedahay ka-hortagga lumitaanka maqalka ee buuqa keenay. Waxay tan ku samaysaa iyada oo ku dhaqmeysa sirtuin ama SIRT3 ku-tiirsanaanta farsamada oo yareyneysa xumaanshaha neurite .
Saamaynta dadka sonkorowga qaba
Nicotinamide ribonucleoside chloride waxay muujisay inay waxtar u leedahay hoos u dhigidda astaamaha xanuunnada dheef -shiid kiimikaad sida sonkorowga Nooca II . Waxaa la muujiyey inay wanaajiso dulqaadka gulukooska, miisaankana hoos u dhigto oo ku daweyso dhaawaca beerka jiirarka. Markaa waxaa laga yaabaa inay waxtar u leedahay daaweynta aadanaha sidoo kale.
Saameynta caafimaadka beerka
Xaaladaha beerka sida cudurka beerka dufanka aan khamriga ahayn ayaa la muujiyey inay sababaan yaraanshaha NAD+. Markaa, ku -biirinta budada NR ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato soo -kabashada wanaagsan ee xaaladahaas .
NAD+ ayaa sidoo kale la ogaaday inay hoos u dhigto gabowga unugyada oo ay dib u soo noolayso. Waxaa sidoo kale la ogaaday inay wanaajiso shaqooyinka unugyada asliga ah oo iyaduna gacan ka geysata yareynta gabowga .
Faa'iidada Nicotinamide Riboside Chloride marka loo eego kuwa kale ee NAD+
NR waxay leedahay bioavailability ka fiican oo way ka ammaan badan tahay in la isticmaalo marka la barbar dhigo horudhacayaasha kale. Waxaa la muujiyey inay kordhineyso heerarka NAD+ wax badan oo ku saabsan qaadashada afka ee jiirarka waxayna sidoo kale siisaa NAD+ muruqyo badan marka la barbar dhigo horudhacayaasha kale. Waxa kale oo ay si fiican u xakamayn kartaa heerarka lipid dhiigga oo u kordhin kartaa heerka NAD+ ee wadnaha .
Saameynada Dhinaca Nicotinamide Riboside Chloride
Qaadashada afka ee nicotinamide riboside chloride ee qadar hoose waa ammaan. Waxaa ku jiri kara waxyeellooyin qaarkood sida
Sida Loo Iibsado Nicotinamide Riboside Chloride?
Haddii aad rabto inaad iibsato budada NR, waxaa fiican inaad si toos ah ula xiriirto warshadda soo saaraha Nicotinamide Riboside Chloride. Waxay hubisaa in agabyada ugu wanaagsan loo adeegsado wax -soo -saarka, iyadoo ay isha ku hayaan khubarada ku xeeldheer arrimaha la xiriira. Alaabooyinkaan waxaa la sameeyay iyadoo la raacayo tilmaamo ammaan oo adag oo hubiya in badeecadu ay tahay mid tayo sare leh, lehna awood weyn, oo si habboon loo baakadeeyay. Iyadoo loo eegayo baahida qofka isticmaala, amarada ayaa loo habeyn karaa si ay ugu haboonaadaan dhadhankooda gaarka ah.
Marka badeecada la sameeyo, waxay u baahan tahay in lagu hayo heerkul qabow ah 0 ilaa 4C muddada gaaban iyo -20C muddada fog. Waa in laga hortago in ay xumaato ama falceliso kiimikooyinka kale ee deegaanka.